26/06/2007: Submitted for publication via web
Buugga KARAAN Iyo Maansada Kasmo
by Maxamed Yuusuf (Keyse)
Qofka xil haya ama xil sugaha ah ama dadkiisu aqoonta ku tuhmayo waxa la gudboon inuu wax ku qiimeeyo garasho iyo aqoon. Marka labaad waxa qofka la gudboon inuu qiimeeyo halka uu ku nool yahay iyo xaaladaha ku wareegsan, isla markaana uu derso sida loo xallin karo wixii mashaakil ah ee duruufaha goobtu keeni karto. Haddii aad qiimayn kariweydo goobta aad joogto iyo xaaladda ku wareegsan taas micnaheedu waxa weeye inaanad awoodikarin xallinta duruufaha ku hor yaalla.
Nafta iyo karaankeeda
Kaska iyo tukubaheeda
Iyo kolayga weelkeeda
Iyo kooska ay joogto
Iyo kaalintay leeday
In loo kuurgalaa weeye.
Qofka aadmiga calafkiisa (duunyo iyo derejaba) iyo cimrigiisa Ilaahay baa qoray. cid adduunka ku nool oo qofka wax Ilaahay u qoray ka baajin kartaa ma jirto. Markaa qofku inuu hamuuntiisa xakameeyo weeye, inuu carrabkiisa xaslado weeye, inuu wax kasta oo naftiisu ku fekerto fiiro iyo aqoon ku qiimeeyo weeye. Hadba iinta iyo dhalliisha muuqata in xis iyo garasho lagu kabo oo lagu daweeyo weeye. Waxa kale oo habboon in qofku ogaado in bulshada isku xidhnaanteeda iyo wadajirkeedu ku jiro iyadoo la joogteeyo kulankeeda iyo wadatashigeeda, iyadoo lagu saleynayo xigmad, garasho iyo walaaltinimo.
Kadab waa ma baaqdaane
In kamiinta fadalkeeda
Kaadso lagu xidhaa weeye
Kashu inay sugtaa weeye
Kasmo lagu daraa weeye.
Kalka jaban mataantiisa
In garaad kabaa weeye
Xisku inuu kobcaa weeye.
Bulsho kadan daweynteedu
Kulankiyo samaha weeye
Kaashiga murtida weeye
Kalgacaylka guud weeye.
Xil waxa lagu gutaa karti iyo dulqaad; waxa ku habboon qof kelmaddiisu damin karto balaayo oogan, kuna qanacsanaan kara inuu weedhiisa wax ku daaweeyo. Waxa ku habboon qof talada iyo aqoonta ka raadiya cidday ku jirto ee lagu tuhunsan yahay. Nin fiiro badan oo talada rogroga; oo hadba dhinac ka eega; oo samir iyo degganaan saldhig ka dhigta ayaa xil u qalma. Ruux bulshadiisa baahideeda og, oo hadba waxa la hayo ku dadaala inuu gaadhsiiyo ayaa hoggaan bulsho u qalma.
Xilku siduu u culus yahay si la mid ah ayuu ugu baahan yahay kalsooni buuxda iyo karti waafi ah in lagu wado.
Kabaal qaadka hawsheeda
Karti iyo dulqaad baa leh
Nin kulaylka damiyaa leh
Kelmad ugu badheedhaa leh
Kari kara samaantaa leh
Koobiya xaqiiqdaa leh
Kurtimaha la yaabkeeda
Kitaab keeda baadhaa leh
Samir ugu kabyeelaa leh
Nin karuurka muunaynta
Ugu qaybsha kalax baa leh
Kama nimaan aqoon baa leh
Kayr-kayrka geyin baa leh
Nin kalsooni qaba baa leh
Kaalintiisa buuxshaa leh.
Maxamed Yuusuf (Keyse)
The views published here are solely those of its authors (Maxamed Yuusuf (Keyse)) and do not necessarily reflect those of REDSEA-ONLINE.COM.